“Takariva an-gitara” : hampiray talenta i Mbola, i Malm ary Ralanto | NewsMada
“Takariva an-gitara” : hampiray talenta i Mbola, i Malm ary Ralanto
Inona no ifandraisan’i Malm sy Ralanto? Maro ireo efa mahalala, saingy mbola misy ihany ireo manontany tena. Marina tokoa fa mirona amin’ny gadona ankehitriny i Malm, izay tao anatin’ny tarika Martiora Feedom ary fantatra amin’ny gadona gasigasy kosa Ralanto. Talenta nifandovana anefa, satria mpianaka izy ireo.
Ho an’ireo liana te hahalala misimisy kokoa, hisy ny seho “Takariva an-gitara”, izay ahitana azy mianaka an-tsehatra, ny alin’ny zoma 27 oktobra izao, etsy amin’ny Restaurant Telozoro Andrefan’Ambohijanahary. Hiaraka hizara ny kanto amin-dRalanto sy i Malm mandritra io fotoana io i Mbola Talenta.
“Samy mpitendry gitara mirona amin’ny ba gasy izaho sy Ralanto. Fotoana mba hiarahanay mampiseho talenta miaraka io. Ankoatra ny gitara, sady mitsoka sodina sy farara Ralanto ka hifameno ao avokoa izany”, hoy ny nambaran’i Mbola Talenta.
Araka izany, mazava loatra fa hisongadina ny hiran-dRalanto, iarahan’izy telo ireto. Hanaraka eo koa ny sanganasan’i Mbola Talenta. Ankoatra izay, hotendren-dRalanto sy i Mbola Talenta ireo hiran’i Malm. Misy koa anefa ny famerenana ireo hira kalon’ny omaly sy hira fahiny an-gitara, izay nomanin’ireto mpanakanto ireto manokana. Hanakoako indray araka izany ry “Sipa maintikely”, “Mokonazy”, “Vorona” an-dRalanto, ny “Manino ianao ry zavavy”, “Longoko” an’i Malm, “Ny vola” (Rabenaivo Charles), “Ifonako” (Razilinah), sns.